ShweMinThar: Protein Supplement အကြောင်း တစေ့တစောင်း
(Introduction to Protein Supplement)
ကြွက်သားတွေနဲ့ ကျစ်လျစ်တဲ့ ကျား/မ ခန္ဓာကိုယ်ရဖို့ အလေးမဖို့လိုမယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို Protein ဆိုတာ မရှိမဖြစ်ပါလို့လဲ ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။Fitness လောကမှာ Dumbbell အလေးတုံးတွေနဲ့ ပြိုင်တူ ခေတ်စားလာတာကတော့ Protein supplements တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Protein ဟာ Bodybuilding လောကရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီအကြောင်းကို အခုမှ စရေးဖြစ်တာမို့ နောက်ကျသွားခဲ့ရင် အရင်ဆုံးစိတ်မရှိပါနဲ့လို့ စကားခံရမှာပါပဲ။
Gym စဆော့မယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ် အလေးမတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး စိတ်ဝင်တစားသိချင်၊ ရှိချင်တာက Protein powder အကြောင်းပါပဲ။ သူများတွေ သောက်ကြတာတွေ့ပေမယ့် နားကန်းတလုံးနားမလည်တဲ့ အချိန်မို့ သောက်သင့်လား၊ သောက်ဖို့လိုသလား၊ ဘယ်လောက်သောက်ရမှာလား စသဖြင့် လားပေါင်းများစွာနဲ့ ဖြစ်တတ်ကြတာမဆန်းပါဘူး။
ကိုယ်တွေ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Protein supplement ရောင်းတဲ့ဆိုင်အရင်ဆုံး ရောက်ခဲ့ဘူးတာလေးနဲ့ စရမှာပါပဲ။ ဆိုင်ထဲရောက်တော့ အရောင်းဝန်ထမ်းက
" ဘာရှာသလဲပေါ့၊ ဘာအတွက်လဲပေါ့။ Bodybuilding အတွက်လား"
" အင်း၊ ဟုတ်တယ်။ ဘာသောက်သင့်သလဲ " (အမှန်က အိပ်ထမတင်လောက်ပဲ လုပ်ဖူးတာ)
ဒါနဲ့ပဲ ၀န်ထမ်းက Whey powder ရှိတယ်၊ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးပြီး ဒီအသက်အရွယ်ဆို ၂ဇွန်းသောက်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ဘာမှနားမလည်တော့ ဘယ်အချိန်သောက်ရမှာလဲ၊ ဘာနဲ့ သောက်ရမှာလဲ၊ ဒီPowder ကဘာဖြစ်စေသလဲ၊ ဘာမှမမေးရဲခဲ့ဘူး။
အခုမှ စသူတွေအနေနဲ့လဲ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို သိချင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့စလုပ်နေပြီ၊ Protein shake လဲ စသောက်နေပြီ ဆိုသူများအတွက်လဲ ကိုက်မကိုက် စစ်ကြည့်ကြတာပေါ့။
အရင်ဆုံး Protein powder shake သောက်ဖို့လိုသလား ???
အပေါ်မှာ အရောင်းဝန်ထမ်းက အသက်ဘယ်လောက်ဆို ဘယ်နဇွန်းသောက်ဆိုပြီး ညွှန်းတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မမှန်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်သင့်လဲဆိုတာ အသက်နဲ့မဆိုင်ပဲ ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားအလေးချိန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်အလေးချိန်ဟာ ၁၅၀ပေါင်ဆိုပါဆို့။ သင်ဟာ အမှန်ပိန်စဉ်မှာ ရှိသင့်တာက ၁၄၀ပေါင် (၁၀ပေါင် ၀နေတယ်)ဆိုရင် သင်တစ်နေ့တာ ရရှိရမယ့် Protein ပမာဏဟာ ၁၄၀ gram ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ 140 gram proteins ပမာဏကို အစားအသောက်(အသား၊ငါး၊နို့ စသည်)ထဲက ရသလောက်ယူနိုင်သလို၊ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကို Protein shake သောက်ပြီး ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ Protein ပမာဏကို သိမှသာလျှင် သောက်ဖို့လိုမလို၊ စစ်ဆေးလို့ရမယ်မဟုတ်လား။
0.8 x 140 ပေါင် = 112 grams of protein
1x 140 ပေါင် = 140 grams of protein
ပေါင် ၁၄၀ ရှိတဲ့လူအတွက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ Protein ပမာဏဟာ 112 grams ကနေ 140 grams အတွင်းရှိသင့်ပါတယ်။ သင့်အလေးချိန်က ပေါင် ၁၀၀ ဆိုလဲ ၁၄၀ နေရာမှာ ၁၀၀ ထည့်ပြီး တွက်ရင် ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာပါ။
လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကို သိပြီဆိုရင် ဒီ ပမာဏကို အစာတစ်ခုထဲနေ လုံလောက်စွာ ရနိုင်သလား မေးဖို့လိုပါပြီ။ အစာတစ်ခုထဲကနေ 140 grams protein ရအောင်စားနိုင်ရင် Supplement (ဖြည့်စွက်စာလို့ခေါ်တာ လိုအပ်လို့ ဖြည့်စွက်ရလို့) မလိုရေးချမလိုပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် အစားအစာထဲက 100 grams protein ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Protein shake ထဲကနေ 40 grams လောက် ဖြည့်ဖို့လိုသည်ပေါ့ ခင်များ။
ဒါပေမယ့် Protein shake မလိုပဲ လုံလောက်တဲ့ Protein ရအောင်စားမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ပြသနာ ၃ခုရှိလာပါပြီ။
၁။ လုံလောက်တဲ့ 140 grams (ဥပမာ) ကို စားဖို့ အဲလောက်ဗိုက်မကားပါဘူး။
ဒီလိုပမာဏစားဖို့ဆိုရင် ကြက်သား၊ ငါး၊ အမဲသား မည်သည့်အသားကို မဆို ပမာဏတော်တော်ကြီးကို စားဖို့လိုတာမို့ လူတော်တော်များများ ဘယ်လိုမှဗိုက်ကားလို့ မစားနိုင်ကြပါဘူး။
၂။ လုံလောက်အောင် စားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ စားတဲ့ ပမာဏများလို့ မလိုအပ်ပဲ ကြွက်သားအပြင် အဆီတွေ တက်လာနိုင်ပါတယ်။
Protein 50 grams လောက်ရဖို့ Shake သောက်မယ်ဆိုရင် Calories 200နဲ့ 250 ကြားပဲရှိပါတယ်။ ဒီလို Shake မသောက်ပဲ အသားဟင်း၊ ငါးဟင်း၊နွားနို့စသည် သောက်ရင် Protein 50 grams ရဖို့ Calorie သုံးလေးရာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဟင်းအဖြစ်ချက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဆီကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တာ Protein 140 grams ပုံစံမျိုးနဲ့ စားလိုက်ရင် မလိုအပ်တဲ့ အဆီတွေပါ အပိုဆု အဖြစ်တက်လာမှာ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်။
၃။ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ အဆင်မပြေခြင်း
ဒီ အချက်ကတော့ Protein shake တွေ အရေးပါလာတာရဲ့ အဓိကအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။ အခုလို နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရ၊ ကျောင်းတက်ရ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Protein ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာကို များများရနိုင်ဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ အိမ်မှာ ချက်စားရင်တောင် အမေကို အသားတစ်မျိုးပဲ အများကြီးချက်ပါဆို အသားမကြိုက်တဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ အဆဲခံရကိန်းလဲ ရှိသေးမဟုတ်လား။
ဒီလိုကြောင့်ပဲ Whey protein powder ဟာ မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် Bodybuilding လောကမှာနာမည်ကြီးလာတာပါပဲ။ ဒီ Protein powder ကြောင့်ပဲ တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်ရသူတွေ၊ မအားလပ်သူတွေပါ Gym ဆော့နိုင်၊ လိုအပ်တဲ့ Protein ပမာဏကို ရရှိနိုင်ကြတာပါပဲ။ ဒီ supplement မရှိရင် တစ်နေကုန် စားသောက်ဖို့ အချိန်ပေးပြင်ဆင်နိုင်သူတွေသာ Bodybuilding လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။
ဘယ်လိုလူတွေ သောက်ဖို့လိုသလဲ ???
မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီး ပြောနေရင်းနဲ့ စိတ်ထဲပေါ်လာတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ၀ယ်ပါ၊ ၀ယ်ပါလို့ ကြေငြာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာ့ကြောင့် သောက်ဖို့လိုအပ်လဲ ပြောအပြီးမှာ ဘယ်လိုလူတွေ သောက်သင့်သလဲဆိုတာကို အကြမ်းပြောပါ့မယ်။
လောလောဆယ် ၀နေလို့ ပြေးတယ်၊ ကြိုးခုန်တယ်၊ အဆီချဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတဲ့လူတွေအတွက် သောက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီလို အဆီကျဖို့ လုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကြွက်သားတွေ ပြတ်နေတာ၊ ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ protein စားဖို့လိုတာတွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် သောက်စရာမလိုပါဘူး။ ပိုက်ဆံကုန်ပါတယ်။
သောက်သင့်သူများလို့ ရေးတာထက် သောက်ဖို့လိုအပ်သူများလို့ ရေးတာက ပိုပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုလူတွေလိုအပ်သလဲဆိုရင် အလေးမတဲ့ ကျား/မ မရွေးလိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ ရင်ဘတ်ကြွက်သားအတွက်၊ တင်ပါးအတွက်၊ လက်မောင်းအတွက် ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးထွားလာဖို့ အလေးတုံးနဲ့ အလေးဆော့နေသူတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ အလေးတုံးနဲ့ မဟုတ်လဲ ကိရိယာလွတ်သမားတွေလဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားထွက်လာတယ်၊ တင်သားလှလာတယ်၊ ရင်သား ရင်အုတ်လှလာတယ်ဆိုတာမျိုးဟာ ကြွက်သားအသစ်တွေ တည်ဆောက်လာ၊ ဖွံ့လာလို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ အတွက် အလေးမပြီး ကြွက်သားတွေ ပြတ်အောင်လုပ်၊ ပြတ်သွားတဲ့ ကြွက်သားတွေ အသစ်အသစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ Protein ဖြည့်၊ ဒါမှသာ ကြွက်သားကျစ်ကျစ်တွေနဲ့ ခန္ဓာအသွင်လှလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ရေစစ် ကျစ်ချင်သူတွေအတွက် ကြွက်သားထွက်ဖို့ အလေးမ ရုံတစ်ခုထဲနဲ့ မဟုတ်ပဲ Protein ဖြည့်ဖို့က မရှိမဖြစ်လိုတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
အနည်းငယ် ပိုက်ဆံသုံးရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ မလုပ်ရင်လဲ အရှင်း၊ လုပ်ရင်လဲ မှန်အောင်လုပ်ဆိုတာ ပိုဖြစ်သင့်တယ်မလား။
တစ်နေ့ ပမာဏ ဘယ်လောက်လိုလဲ၊ ဘာ့ကြောင့်သောက်သင့်သလဲ၊ ဘယ်လိုလူတွေ သောက်ဖို့ လိုပြီလဲ ပြီးရင် ဘယ်လို Protein powder တွေက အခြေခံကျလဲဆိုတာ ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ ဒါမှပဲ Admin ကြုံခဲ့ဘူးသလို ဘာဝယ်ရမှန်းမသိ ကြောင်တောင်တောင် ဘ၀မျိုးကို မကြုံရမှာဟုတ်။
Whey protein powder ဟာ အလေးမရင်း ကြွက်သားထွက်လိုသူတွေရဲ့ အခြေခံ တစ်ခုနဲ့ လူသုံးအများဆုံးပါ။ အကြမ်းအားဖြင့် ဘယ်တံဆိပ်မဆို Complete protein ပါပြီး တစ်ခြားလိုအပ်တဲ့ Amino acid မျိုးကွဲလေးတွေလဲ ပါတတ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပဲ Whey protein powder ရဲ့ အားသာချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်က ပျော်ဝင်မြန် ဓါတ်ပြုမြန်တာပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး (လုပ်နေစဉ်ရော) ကြွက်သားပြတ်တောက်မှုတွေ ကြုံအပြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုတွေ လိုအပ်နေပြီ ဆိုပါစို့။ ဒီအချိန်မှာ Whey protein သောက်ခြင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ Proteinကို ခန္ဓာကိုယ်က အလျင်အမြန်ရနိုင်တာမို့ များသောအားဖြင့် Whey protein ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်မှာ ရေအစား တစ်ငုံ၊ တစ်ငုံစီသောက်လို့ ရသလို လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးမှာလဲ သောက်လို့ရပါတယ်။
" Whey protein shake မသောက်ပဲ Protein ကို အသားတွေစားပြီး ရမယ်ဆိုရင်ကော "
လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ တစ်ခုကွာတာက အစားအစာ စားမယ်ဆိုရင် အာဟာရအဖြစ်ရဖို့ အစာခြေချိန်တစ်ခုကို စောင့်ရမှာပေါ့။ Whey protein အတွက်ကတော့ လျင်မြန်စွာ အစာအိမ်ထဲ ရောက်၊ လျင်မြန်စွာ အာဟာရ အဖြစ် ဓာတ်ပြု ဖြိုခွဲနိုင်တာမို့ အစားအစာထက် အနည်းငယ်ပိုသာလွန်ပါတယ်။ Shake သောက်အပြီး ရေမိုးချိုး၊ အနားယူပြီးမှ အစားအစာကို စားလို့လဲရပါတယ်။ တစ်ချို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး Protein များတဲ့ အစားအစာကို ချက်ချင်း မစားနိုင်သူတွေ (ဥပမာ Gym ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်၊ အနားယူပြီးချိန်) အနေနဲ့ ကြားမှာ လစ်ဟသွားနိုင်တဲ့ ၂နာရီကာလအတွင်းမှာ အစာ အစား Whey protein ကို ကြွက်သားတွေအတွက် အာသာဖြေခံထားနိုင်တာကလဲ ပိုအဆင်ပြေသလို၊ ပိုလဲ အကျိုးရှိစေတယ်ဟုတ်။
Whey protein powder ဘယ်ကရသလဲ ???
တစ်ချို့လူတွေမှာ အယူရှိတတ်ကြတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အစားအစာကလွဲရင် အပိုအလို ဆေးသောက်တာ သိပ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ အယူပါ။ ဒါကလဲ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတွေက မသုံးရင် ဘာမှမဖြစ်၊ သုံးလိုက်မှ လိမ်ရောင်းရင် လိမ်ရောင်းသလောက် ကိုယ်က ခံရတာချည်းပဲမလား။ ဒါ့ကြောင့် အကြမ်းဖျင်းတော့ Whey protein powder ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာ အောက်မှာ ရေးလိုက်ပါတယ်။
အခုမှသာ Whey protein၊ Whey protein နဲ့ ကြားဖူးပေမယ့် တစ်ကယ်တော့ ထူးဆန်းထွေလာ နေရာကနေ ရလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်နေ့စဉ်သောက်သုံးနေတဲ့ နို့မှာ Whey protein 20% ရယ်၊ Casein 80% ရယ်ပါပါတယ်။ Whey protein က အစာခြေလွယ် ဓာတ်ပြုလွယ်ပြီး Casein ကတော့ အစာခြေတာနှေးပြီး Protein ကို ဖြေးဖြေးချင်း လွှတ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ Company တွေကနေ သက်ဆိုင်တဲ့ Chemical procedure တွေနဲ့ နို့ကနေ Casein နဲ့ Fatကိုဖယ်ပြီး Cheese လုပ်၊ ဖယ်အပြီးမှာ ကျန်တဲ့ နို့က Whey protein ဓာတ်အများဆုံးနဲ့ ကျန်ခဲ့၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ Whey proteinနဲ့ နို့ရည်ကို ပိုသန့်စင်အောင် Process တွေလုပ် (အကျယ်တော့ သိစရာမလိုပါ)၊ နောက်ဆုံး သန့်စင်တဲ့ Whey protein အဆင့်ရောက်တဲ့ အခါမှာ Drying tower ထဲကိုဖြတ်၊ အခြောက်ခံတဲ့ အဆင့်အရောက်မှာတော့ နို့အရည်ကနေ အခု အထုတ်တွေ၊ ဘူးတွေနဲ့ ရောင်းတဲ့ အမှုန့်အဖြစ်ရလာတာပါပဲ။ တကယ်တော့ Whey protein powder ဟာ နို့ထဲမှာ ပါတဲ့ Whey protein ကို သိပ်သည်းအောင်၊ ကျစ်လျစ်အောင် (တစ်ဇွန်းထဲနဲ့ protein 20gram ကျော်ပါအောင်) လုပ်ထားတာမို့ ကျန်းမာရေးအရ ပြသနာမရှိပါဘူး။
Whey powder အတွက် အကျဉ်းပြန်ချုပ်ရရင် လုပ်နေစဉ်သောက်နိုင်သလို၊ လုပ်အပြီးမှာလဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ တစ်နေ့တာ ကိုယ်စားတဲ့ Protein ပမာဏအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ 100 grams လိုအပ်ချိန်မှာ အစာကနေ 50 grams ရအောင် စားနိုင်သူဆိုရင်တော့ Whey ကနေ 50 grams လိုမှာဖြစ်ပြီး အစာကနေ 80 grams စားနိုင်ရင် Whey ကနေ 20 grams လိုမှာပေါ့။ လုပ်နေစဉ်၊ လုပ်အပြီး၊ မနက်နိုးချိန် ဘယ်အချိန်မဆိုသောက်နိုင်ပါ၏။
နို့ထဲက 80% protein ဟာ Casein ဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပြု နှေးတယ်လို့ အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့တယ်ဟုတ်။ Casein ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ Protein ကိုပေးတာဖြစ်လို့ အိပ်ရာမ၀င်ခင်မှာ သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုသောက်ခြင်းဖြင့် အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လိုအပ်တဲ့ Protein ဓါတ်ပြုမှုကို အိပ်နေစဉ် နာရီတွေမှာ တဖြေးဖြေးချင်းရနိုင်တာပါပဲ။
အိပ်ရာဝင်ချိန်တစ်ခုထဲတော့ မဟုတ်၊ ကြားထဲမှာ Protein စားဖို့ သုံးလေးနာရီလောက် ကွာဟမယ်ဆိုရင်လဲ သောက်လို့ရပါသေးတယ်။ အဓိကကတော့ Protein ကိုဖြေးဖြေးမှန်မှန် လွတ်ပေးနေတာမို့ အစာစားချိန် တစ်ချိန်နဲ့ တစ်ချိန်ကြား နာရီများစွာကွာဟသူတွေ သောက်လေ့ရှိပါတယ်။
Casein powder ကို အရည်ဖျော်ရင် အနည်းငယ်ပျစ်တဲ့ သဘောမှာရှိသလို ညဘက်ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့သူတွေအတွက် သောက်အပြီးမှာ ဗိုက်ဆာတာကို သက်သာစေပါတယ်။ သောက်အပြီးမှာ ဗိုက်ပြည့်တယ်လို့ ခံစားရတာကိုး။
Casein powder ရော၊ Whey ကိုရော ၂မျိုးလုံးသောက်တဲ့လူ (ပြိုင်တူရော သောက်တယ်ကို မဆိုလိုပါ၊ Whey ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ် လုပ်အပြီး၊ Casein ကို အိပ်ရာမ၀င်ခင် စသည်) နဲ့ Whey တစ်မျိုးထဲကို သောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူ အုပ်စု ၂မျိုးခွဲပြီး ဘယ်သူက ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှု မြန်သလဲ စမ်းသပ်စစ်တမ်းကောက်တဲ့အခါ ၂မျိုးလုံးလုပ်သူ အဖွဲ့က ကြွက်သားအတက်မြန်ရုံတင်မကပဲ ကြွက်သားတက်တဲ့အခါ အဆီအနည်းငယ်လောက်ပဲ တွဲပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အဆီလျှော့ချမှု၊ ခွန်အားပိုရှိလာမှုတွေကို Casein သောက်ခြင်းဖြင့်ရနိုင်သလို အပိုဆုအနေနဲ့ သွားကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုသေးပါတယ်တဲ့။ အချိုစားသူ၊ သစ်သီးများများစားတတ်သူတွေအတွက် သွားကျန်းမာရေးကောင်းချင်ရင် Casein protein အနည်းငယ်ကို ဖျော်ရည်ထဲ ထည့်သောက်သင့်တယ်လို့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ တွေ့၇ပါတယ်။
Whey protein ပြီးရင် Casein protein ဟာ ဒုတိယ အခြေခံအကျဆုံး အဖြစ် Bodybuilder တွေ သုံးစွဲကြတာမို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင်ဟာ အခုမှ စချင်သူ၊ စလုပ်သူဖြစ်ပြီး တစ်မျိုးပဲ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် Whey protein ကို စသောက်ဖို့ အကြံပြုလိုပြီး " ရတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တယ် " ဆိုသူများအဖို့ ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် Casein တစ်ဇွန်းကို သင့်ရဲ့ Diet ထဲမှာ တည့်နိုင်ပါကြောင်း။
3- Mass Gainer
Mass gainer ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် ပိန်သူတွေ ထုတက်စေဖို့ Calorie များတဲ့ Protein powder တစ်မျိုးပါပဲ။ Protein များလို့ (တခြား အစွမ်းထက်တဲ့ Creatine၊ L-GLUTAMINE စတာတွေလဲ ပါပါတယ်) ကြွက်သားအတွက်လဲ အကျိုးရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က Calorie များတာပါပဲ။ ဘာလို့ Calorie များတာလဲ ???
အလေးချိန်တစ်ပေါင်တက်လာဖို့အတွက် အကြမ်းဖျင်း Calorie 3500 ပိုလာဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအလေးချိန်ဆိုတာ ကြွက်သားဖြစ်နိုင်သလို ကြွက်သား+အဆီလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီလို Calorie ပိုမှသာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်။
ဒီနေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ Calorie ကို အစားအစာကရပါတယ်။
အရမ်းပိန်သူတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာက ဘယ်လောက်စားစား ၀မလာတာရယ်၊ များများမစားနိုင်တာရယ် ၂မျိုးအဖြစ်များတယ်။ သူတို့ကတော့ တွေးမှာပေါ့။
"ဒီလောက်စားနေတာ တော်တော်များနေပြီ၊ ဒီ့ထက် ပိုစားရမယ်ဆို မဟုတ်သေးပါဘူးရယ်ပေါ့။"
ဘယ်လောက်ပဲ တအားစားနေတယ်ထင်ထင် ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အထင်ပါပဲ။ သူတို့ အတွက်ကများတယ်ထင်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က သိတာကတော့ Calorie မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အရမ်းပိန်သူတွေ၊ ကြွက်သားတက်ဖို့ အတွက် ထပ်မစားနိုင်သူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အများကြီးစားသောက်ဖို့ အဆင်မပြေသူတွေ အတွက်လိုအပ်တဲ့ Calorie အပိုကို ဒီ Mass gainer ကပေးပါလိမ့်မယ်။
" ဒါမသောက်ပဲ အစာပဲ စားတဲ့နည်းရော မရှိဘူးလား"
Calorie များတဲ့ အစားအစာတွေ ရွေးစားရင်တော့ ရတာပေါ့။ ဥပမာ Peanut butter တို့၊ ဆီကြော်စာတို့ စားရင် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Calorie များစွာရနိုင်ပေမယ့် တက်လာမယ့် အလေးချိန်တစ်ပေါင်ဟာ ကြွက်သား (နဲနဲ)+ အဆီ (များများ) ဖြစ်သွားတတ်ကိုတော့ သတိပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို အစာတွေစားမယ်အစား လိုအပ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အဆီ (Fat)၊ carbohydrate နဲ့ Protein ကို အလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့ Mass gainer ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Mass gainer ၂ဇွန်းလောက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ Calorie 500 ၀န်းကျင်မှာရှိပြီး ဒါဟာ ထမင်း ၂ပန်းကန်ခွဲ စာနဲ့ညီပါတယ်။ မတူတာကတော့ ထမင်း ၂ပန်းကန်ခွဲမှာ မပါတဲ့ Protein 40 grams နည်းပါးလောက်ပါတာပါပဲ။ Protein 40grams ဆိုတာ ပါဝင်မှုတော်တော်များတယ်လို့ ဆိုလို့ရပြီး ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းဆော့သူတွေအတွက် Protein များလေ ကြိုက်လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
၂ဇွန်းမှာ Calories 500 ( အတိအကျမဟုတ်၊ တံဆိပ်မတူ၇င် မတူသလိုပေါ့) ဆိုတော့ တစ်နေ့၂ဇွန်းသောက်၊ တစ်ပတ်ဆို 500 cal x7days = 3500 calories အပိုရမယ်ဆိုပါစို့။3500 calories ဟာ တစ်ပေါင်နဲ့ ညီတာမို့ တစ်ပတ်မှာ ၁ ပေါင်တတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှုန်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ပေါင်များစွာတတ်လာရင် အဆီဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ အစမ်းသောက်ကြည့်၊ တစ်ပတ်မှာ ၁ပေါင်တတ်ရင် ဆက်သောက်၊ မတက်သေးဘူး ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲ ဒီအတိုင်းပဲဆို တစ်နေ့မှာ အရင်ထက် တစ်ဇွန်းပိုသောက် စသဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Creatine ဟာ Bodybuilding လောကမှာ အသုံးအများဆုံး Supplement တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
Creatine ကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သဘာဝအလျောက်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားငါးတွေက ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမယ့် ပမာဏနည်းလွန်းပါတယ်။ Creatine အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတာကတော့
- ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အချိန်ပိုင်းအတွင်း တောင်းဆိုတဲ့ စွမ်းအင်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ အလေးဆော့သူတွေအတွက် ၁၀ကြိမ်တစ်ခေါက် (၁၅ Seconds) လုပ်ပြီဆိုပါစို့။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ တစ်ရှိန်ထိုး အစွမ်းကုန်သုံးလိုက်ရတဲ့ စွမ်းအင်ပိုင်းကို Creatine က တိုးစေတာပါပဲ။
- Creatine ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရာမှာ အကူအညီပေးတယ်လို့ ဆိုထားတယ်ဟုတ်။ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နိုင်လေ ပိုပိုကောင်းတဲ့ Result ရလေဆိုတာတော့ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
- Creatine ဟာ ကြွက်သားတွေကို ရေဓါတ်တွေ ပြည့်ဝစေပါတယ်။ ရေဓါတ်ကြောင့် ပိုကြီးလာဟန်ပေါ်စေတယ် ဆိုကြပေမယ့် ရေရှည်မှာလဲ Creatine ပုံမှန်သောက်သူဟာ ကြွက်သားကြီးထွားမှုမှာ တစ်ပန်းသာတယ်လို့ သုတေသနတွေက ဆိုပါတယ်။ (ကြွက်သားတွေက ရေဓါတ်တွေကို ပြည့်ဝအောင် စုပ်ယူတယ်ဆိုတော့ သင့်အနေနဲ့ ရေများများသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင်ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီဆိုကတည်းက ရေများများသောက်သင့်တာမလို့ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး)
- Creatine ကို အားကစားသမားအစုံ သောက်နိုင်ပါတယ်။ ရုတ်ချည်းစွမ်းအင် ထုတ်မှုကို တိုးစေတာမလို့ တာတိုပြေးရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးပါတဲ့ ဘောလုံးကစားသူတွေ၊ Basketball ဆော့သူတွေလဲ သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းမကောင်းသူတွေဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အရင် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Creatine သုံးခြင်းကြောင့် ရနိုင်တဲ့ အကျိုးတွေထဲက တစ်ချို့ အချက်တွေပါပဲ။ ကိုယ်တွေ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Creatine ဟာ Gym ထဲမှာ သင့်ကို Heavy တွေ မဖို့ အကူအညီပေးသလို Recovery ပိုင်းမှာလဲ အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မသောက်ဖြစ်တဲ့ အပတ်တွေဆို အရင်သောက်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေလောက် အားမရှိတာမျိုး ခံစားဖူးပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပဲ Creatine ဟာ Bodybuilding လောကမှာ အသုံးများဆုံးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။
တခြား BCAA၊ Glutamine စသည် supplement တွေ ရှိပေမယ့် Bodybuilding အတွက် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီ ၃မျိုးကို အရင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၊ Whey Powder
ပျော်လွန်မြန်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်၊ လုပ်အပြီး၊ မနက်ခင်း စတာတွေမှာ သောက်နိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ အသောက်အများဆုံး Protein ဖြစ်ပြီး Bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူ၊ အလေးမသူတွေ ကြွက်သားကြီးထွားချင်သူတွေ သောက်ကြပါတယ်။
၂၊ Casein Powder
ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ Protein ကို ထုတ်ပေးတာကြောင့် အစာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား သုံးလေးနာရီ ခြားစားသူတွေ သောက်နိုင်သလို၊ အိပ်ရာမ၀င်ခင်လဲ သောက်ကြပါတယ်။ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအတွက် အထောက်အကူပေးပြီး ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ Whey သောက်၊ အိပ်ခါနီး Casein သောက်လို့ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
၃၊ Mass Gainer
Calorie မြင့် Protein မြင့် Powder ဖြစ်ပြီး ပိန်သူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားရှိပေမယ့် ထပ်ပြီး ထုတက်အောင် မစားနိုင်သူတွေ သောက်နိုင်ပါတယ်။ သောက်တဲ့ အခါ တစ်နေ့ ၂ဇွန်းလောက်နဲ့ တစ်ပတ်သောက်ကြည့်၊ အလေးချိန်တက်တာ များရင် လျှော့သောက်၊ အလေးချိန်တက်တာနည်းနေသေးရင် ၁ဇွန်းပိုသောက် စသဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Creatine ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရာမှာ အကူအညီပေးတယ်။ အလေးဆော့ချိန်အတွင်းမှာ တစ်ရှိန်ထိုး အစွမ်းကုန်သုံးလိုက်ရတဲ့ စွမ်းအင်ပိုင်းကို Creatine က တိုးစေတယ်။ ရေနည်းနည်းနဲ့ ရောပြီး သောက်ရုံပါပဲ။
Powder အားလုံးကို ရေအေးနဲ့ ဖျော်သောက်နိုင်သလို၊ တစ်ချို့ကလဲ နို့နဲ့ ရောသောက်ကြပါတယ်။ စပျစ်သီး၊ သစ်သီးတွေနဲ့ ကြိတ်သောက်သူတွေလဲရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုသာ ကစ်ပေါ့။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ဘယ် Supplement သောက်သင့်လဲ၊ ဘာ့ကြောင့်သောက်သင့်လဲ၊ ဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ သောက်သင့်လဲ စတဲ့ မေးခွန်းတော်တော်များများကို ရှင်းသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာရေးထားတာက Protein supplements အကြောင်း တစေ့တစောင်း၊ ရေးပြီး ကြည့်လိုက်မှ တော်တော်ရှည်တာမို့ Protein supplements အကြောင်း အပြည့်အစုံလို့တောင် ပြောင်းတတ်ရမလိုဖြစ်နေပြီဟုတ်။